Shimano ဂီယာကောင်းပါသလား - သုံးသပ်ချက်များ
အဓိက > သုံးသပ်ချက်များ > Shimano ဂီယာပြန်လည်သုံးသပ် - ကြာရှည်ခံဖြေရှင်းချက်
Shimano ဂီယာပြန်လည်သုံးသပ် - ကြာရှည်ခံဖြေရှင်းချက်
Shimanoမိတ်ကပ်ကောင်းတယ်အစိတ်အပိုင်းများ, ဒါပေမယ့်Shimanoမကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်းလုပ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ၀ ယ်တဲ့အချိန်မှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲမပြေးပါနဲ့ကောင်းပြီဘာမှမ အမြဲတမ်း ဖြစ်ကောင်းဟုတ်ကဲ့တစ်ခုတည်းသောအဖြစ်Shimanoငါတွေ့ဖူးသမျှအမှတ်တံဆိပ်စက်ဘီးများသည်စျေးပေါသော hybrids (သို့) တောင်ကြီးစက်ဘီးများဖြစ်သည်။
စက်ဘီးပေါ်တွင်ဂီယာအလွန်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ ဆိုလိုတာကတော့ကားတစ်စီးမှာမင်းဟာခြောက်ခြောက်လုံးလောက်ပဲအလိုအလျောက်မောင်းလိမ့်မယ်။ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၂၊ စက် ၃၃ လုံးတောင်မပူပါနဲ့။ ဒီတော့သူတို့အားလုံးကိုသင်ဘာလုပ်သင့်လဲ။ (soft, upbeat jazz music) ကောင်းပြီ၊ သတင်းကောင်းကသင်၌ရှိသည့်ဂီယာအရေအတွက်ကိုမေ့နိုင်လိမ့်မည်။
ဒါဟာတကယ်အရေးမကြီးပါဘူး ကျွန်ုပ်စက်ဘီးတွင်ကျွန်ုပ်လုံးဝမသုံးသောဂီယာများရှိသည်။ သို့သော်ထိုပမာဏသည်သင့်၌ရှိသည့်ဂီယာ၏အတိုင်းအတာနှင့်သင်၏အလွယ်ကူဆုံးမှသင်၏အပြင်းထန်ဆုံးဂီယာသို့ပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မတူညီသောဂီယာများကိုရှင်းပြမည့်အစားသင့်အားအခြေခံအကြောင်းအနည်းငယ်ပေးပါလိမ့်မည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ။ ဒါကြောင့်သင်၏ဘယ်ဘက်လက်ကကွင်းဆက်ကြီးတွေကိုရှေ့တန်းရှိ cog ကြီးမားတဲ့လမ်းကြောင်းသို့ရွေ့လျားခြင်းဖြင့်ဂီယာထဲမှာကြီးမားတဲ့ခုန်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။
သင်၏လက်ျာလက်သည်နောက်ကျောရှိဂီယာငယ်များကိုကွင်းဆက်သို့ရွေ့ပြောင်းပြီးအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်စဉ်၊ သင်အစာရှောင်နေသည်ဆိုလျှင်တစ်နာရီ ၁၈ မိုင်နှုန်း (သို့) တစ်နာရီကီလိုမီတာ ၃၀ ခန့်တွင်မင်းသည်ကွင်းဆက်ကြီးထဲတွင်ထိုင်နေဖွယ်ရှိသည် ရှေ့ဘက်မှာ၊ မင်းကပြားကိုစီးပြီးတောင်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်မင်းကမင်းကိုနည်းနည်းလေးချိတ်ထားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်ဘက်လက်ကယေဘုယျအားဖြင့်တော့သိပ်မလုပ်တာကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သင်၏လက်ျာလက်သည်များစွာအလုပ်များလိမ့်မည်။
ထိုအခါသင်သည်လက်ျာဂီယာ၌ရှိနေစဉ်ဘယ်လိုသိရသလဲ တကယ်တော့သိပ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ သငျသညျတစ်မိနစ်လျှင်တော်လှန်ရေး ၇၀ မှ ၁၀၀ အထိသင်ခြေလှမ်းတက်လိမ့်မည်၊ ဒါကြောင့်ဂီယာကိုထိန်းဖို့အရမ်းခက်လွန်းမသွားပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့်တကယ်ကိုအရှိန်မမြန်နဲ့ဘယ်နေရာကိုမှမသွားပါနဲ့။
ဒါဆိုဒါကရှေ့ကိုရွေ့နေတယ်။ သို့သော်၊ သင်ရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည့်အမှားတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာသင်အမှန်တကယ်မလိုအပ်မီဂီယာကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဒါကြောင့်သင်ကတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုမတက်မီဒါကြောင့်သင့်ကုန်းမြင့်မြင့်ကုန်းမြင့်ပေါ်ရှိသင်၏သေးငယ်သောကွင်းဆက်သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်လုပ်ရန်အတော်လေးခက်ခဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပြောင်းပြီးသောအခါဂီယာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောင်းရန်ကြိုးစားပါ။ သတိရရမည့်နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်အစတွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်သံကြိုးကိုပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုသောဖိအားအောက်တွင်မည်သည့်အခါမျှအသုံးမပြုပါ။
ဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ကွင်းဆက်ကြီးတွေနဲ့နောက်ကျောမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ကြယ်ပွင့်တွေထဲမှာမင်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါအဲဒါကို Cross-linking လို့ခေါ်တယ်၊ သင်မကြာခဏပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကွင်းဆက်ကိုပိုပြီးမြန်ဆန်စွာပျက်စီးစေလိမ့်မယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကွင်းဆက်ငယ်များနှင့်နောက်အနိမ့်အမြင့်ကြယ်များသည်အလားတူစွာပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်စကားလုံး၏အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းဖြစ်သည်။
အထူးပြု crux e5 ပြန်လည်သုံးသပ်
နောက်ပြီးအကြောင်းအရာများအတွက်သင်၏ဂီယာကိုအခြားအဆင့်သို့သတ်မှတ်ပါ၊ pro လိုပြောင်းရန်ထိုသို့တက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ဂီယာကိုအမှန်တကယ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြံပြုချက်များအတွက်ထိုနေရာတွင်သာနှိပ်ပါ။
ဘယ် Shimano ဂီယာကအကောင်းဆုံးလဲ?
Shimano105 ကိုစဉ်းစားသည်Shimano ရဲ့ပထမဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အုပ်စုသည်လူများစွာအတွက်ဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်, တန်ဖိုးနှင့်အသက်ရှည်ပေါင်းစပ်အတွက် option ကို။ Ultegra သည် Dura-Ace နှင့်ဆင်တူပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်း Dura-Ace သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။၁၈ ။ 2021 ။
'ကြီးမားသောသုံး' မောင်းနှင်မှုအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုမှာ (ကျန်နှစ်ခုမှာ SRAM နှင့် Campagnolo ဖြစ်သည်),Shimanoအုပ်စုများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသည်၊ များသောအားဖြင့်လူသိများပြီးမကြာခဏစျေးကောင်းသည်။
သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးလမ်းဆိုင်ကယ်ကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုပိုမိုကြီးမားသောကမ္ဘာသို့လှမ်းယူလိုက်သည်၊ သို့သော်သင်၏ပထမဆုံးစက်ဘီးကိုဝယ်ယူခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်မတူညီသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမတူညီသောအမျိုးအစားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ pass, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီဆောင်းပါး၌ရှိကြ၏။ သင့်ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာကိုရှာဖွေရမလဲ၊ ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားမှုကိုအတိအကျပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ငါစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ တကယ်အသည်းအသန်ဖြစ်၏, ဒါကြောင့်စက်ဘီးပေါ်မှာလူတွေပိုပြီးရရှိသွားတဲ့နှင့်မည်သည့်အရာအားလုံးပိုကောင်းကြောင်းစိတ်အားထက်သန်ဝေမျှ။
ဒါကြောင့်ငါတို့ Decathlon နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့မှာတကယ့်ပြည့်စုံတဲ့စက်ဘီးပါပြီးထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့လည်းငွေအတွက်အရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်။ ဆိုလိုတာကဒီဟာမင်းဟာမင်းရဲ့အရာအားလုံးကိုပြသဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်၊ ငါလည်းလိုအပ်တယ် စွန်ငှက်အသစ်တစ်ကောင်နှင့်ငှက်နှစ်ကောင်ကိုကျောက်တုံးတုံးဖြင့်သတ်ပစ်မည့်အတွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကသင်မည်မျှငွေသုံးချင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်မည်မျှပိုက်ဆံဖြုန်းသင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဖြေမှန်မရှိပါ။ ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ကားစက်ဘီးဝယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သတိပြုမိနိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် entry-level လမ်းစက်ဘီးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤကဲ့သို့သော 260 Oro (သို့) £ 250 ခန့်မှစတင်သည်။ ထို့နောက်သင်ငွေသားများများရလေဘောင်များသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးခိုင်မာသော၊ ထိုဘောင်များရှိအစိတ်အပိုင်းများသည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်။ ယူရို ၆၀၀ ၀ န်းကျင်အတွက်စက်ဘီးကိုကြောက်လန့်ပြီးငွေအမြောက်အမြားရရှိနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် disc brakes နှင့်စက်ဘီးစီးစက်တွေမှာဒီစက်ကိရိယာများနဲ့အတူလူမီနီယံဘောင်များနှင့်ကောင်းမွန်သောနိမ့်ကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ သော။ တောင်တန်းများသို့မဟုတ်အဲလ်ပ်တောင်များ၊ သင်သိပြီးမျိုးစုံသောစက်ဘီးတစ်စီးပေါ်မှလူတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးရှိနေသည် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်၏ငွေအားလုံးကိုမဖြုန်းပါနှင့်။ ဖိနပ်၊ ခြေနင်း၊ အဝတ်အစားနှင့်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံး ၀ င်သည်။ ယခုသင့်စက်ဘီးကိုရွေးချယ်သောအခါအသေးစိတ်အနည်းငယ်ကိုဂရုပြုပါ၊ ၎င်းနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများသည်ဘရိတ်နှင့်စုပေါင်းအသုံးအနှုန်းမှဖြစ်သည်။ ဆားကစ်သည်ယခုအုပ်စုဖြစ်သည်။ Campagnolo, SRAM microchip နှင့်နာမည်အကြီးဆုံး shimano အုပ်စု၏ထုတ်လုပ်သူများကွဲပြားသည်။ အမှတ်တံဆိပ်အုပ်စုအစုံသည်မည်သို့ပင်ဆိုစေအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်အဆင့်ဆင့်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ သင်အုပ်စုလိုက်အဆင့်ဆင့်ကိုမြှင့်ပါက၎င်းတို့သည် ပို၍ စျေးကြီးပြီး၊ ပိုမိုစျေးကြီးလာသည်။ ပိုမိုပေါ့ပါးလာသည်။ များသောအားဖြင့်ဂီယာပိုများလေလေပိုမိုထူးခြားသောပစ္စည်းများမှပြုလုပ်ထားသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပိုရလေလေ၊ အပြောင်းအလဲများသည်လည်းယခုပိုမိုချောမွေ့လာလိမ့်မည်၊ စတင်အဆင့်စက်ဘီးများနှင့်စတင်အဆင့်ပြိုင်ကားဆိုင်ကယ် s များကိုများသောအားဖြင့်အဆင့်ဆင့်တွင်အနိမ့်အစုအုပ်စုများဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Shimano ဒုတိယဆင့်အုပ်စုအုပ်စုဖြစ်သော Shimano Sora ဖြစ်ပြီးပေါင် ၅၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသောစက်ဘီးစီးခြင်းတွင်အသုံးပြုသော Shimano Sora သည် Shimano Sora တွင်တက်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သူ့စက်ဘီးမှာ Shimano ရှိတယ်၊ ငါတောင်ဒါမှမဟုတ်တောင်အချို့ကိုတောင်စီးနင်းခဲ့ဖူးတဲ့နေရာအကြောင်းတောင်ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစက်ဘီးက groupet ရဲ့ဂီယာအချိုးကိုမင်းသတိထားမိမှာပါ။ ကျောဘက်မှာ ၁၁၃၂ ကက်ဆက်၊ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်စီးရန်အတွက်အကြံပေးလိုပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ကက်ဆက်နောက်ဖက်ရှိ 32 သွားဂီယာဟာတောင်ကုန်းတွေအတွက်တကယ်အသုံးဝင်လို့ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ခြေထောက်များကိုပိုမိုလှည့်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုခက်ခဲသောကက်ဆက်နှင့်အတူလာကြသည့်စက်ဘီးအချို့နှင့်မတူဘဲ 11:28 တွင်အာရုံစိုက်ပြီးကွင်းဆက်အစုတွင်လည်းအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်၏ပထမဆုံးလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်အတွက်ကျွန်ုပ်အကြံပြုချင်သည်မှာကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကွင်းဆက်အစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ 50:34 ဒီနေရာမှာဒီဟာရှိတယ်။ 32s ကိုထောက်ခံချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သင်ဟာအစပြုသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တောင်မှတောင်ကုန်းကိုနည်းနည်းပိုလွယ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ သင်ဟာစက်ဘီးစီးသူအသစ်ဖြစ်ပြီးသင်လိုချင်သောတောင်ကုန်းများပေါ်တက်နိုင်အောင်ဂီယာများတပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ဘီးနှင့်နောက်ဘက်သေးငယ်တဲ့ဘောင်းဘီတိုများလည်းအုပ်စုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Rim ဘရိတ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒီစက်ဘီးပေါ်မှာ disc breakes တွေမြင်နိုင်သလိုဒီဘရိတ်တွေကအနားကွပ်ဘရိတ်တွေထက်အနည်းငယ်ပိုကုန်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်နေရင်တောင်ထူထပ်တဲ့areaရိယာမှာစီးနေရင်ကော။ အထူးသဖြင့်စိုစွတ်သောအခြေအနေများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုများရှိသောပိုမိုအားကောင်းသည့်ဘရိတ်ကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်တောင်တန်းဒေသများတွင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်သင့်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။
ငါအလေးပေးပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့အသုံးပြုတဲ့အနားကွပ်ဘရိတ်တွေဟာ Tour de France ကိုနှစ် ၁၀၀ လောက်အပြည့်အဝအပြည့်အဝလုံလောက်စေပြီးဒီဘရိတ်တွေထက်အနည်းငယ်ပိုမိုပေါ့ပါးတဲ့အားသာချက်ရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ frame ရဲ့ပစ္စည်းဟာစီးရီးအရည်အသွေးအပေါ်ကြီးမားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်။ အပေါင်ပစ္စည်း ၂၅၀ မှပေါင် ၁၀၀၀ သို့ဒေါ်လာသို့အများဆုံးသောအလူမီနီယံ၊ သံမဏိနှင့်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာများပါရှိသောစက်ဘီးတွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောစက်ဘီးအများစုကိုအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အစွမ်းသတ္တိနှင့်အလေးချိန်အချိုးသည်လေကြောင်း၌အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကာဗွန်ဖိုင်ဘာများထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစက်ဘီးစီးခြင်းကိုယူရိုတစ်ထောင်မှစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ဝင်ခွင့်ကိုသင်စတင်မြင်နိုင်သည်။ - ဤ vanreisel edr 105 ကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာစက်ဘီးများသို့မဟုတ်သီချင်း Sang သည်ရှေ့တွင်ပြောသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ယခုရောက်ရှိနေသောနေရာဖြစ်သည်။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများသောအားဖြင့်လူမီနီယမ်များထက်ပိုမိုပေါ့ပါး။ ပိုမိုခိုင်ခံ့သည်။ ပိုကောင်းသောစီးနင်းနိုင်မှုအတွက်သံမဏိပြုလုပ်ခြင်းသည်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောပစ္စည်းဖြစ်သော်လည်းသင်၏ဘတ်ဂျက်အပြည့်အ ၀ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာမပြည့်ပါကကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးလမ်းဆိုင်ကယ်မှာလူမီနီယံဖြစ်သည်ကိုမစိုးရိမ်ပါ။ Carbon fiber fork ပါသောအလူမီနီယံစက်ဘီးသည်အလေးချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်၊ လမ်းဆုံလမ်းခွကိုပိုမိုတင်းကျပ်စေသည်။ လမ်းတုန်ခါမှုကိုလည်းလျော့နည်းစေပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးချယ်သည့်လက်ကိုင်ဘားများမှတဆင့်အသံများကဘောင်ကိုစနစ်တကျဒီဇိုင်းဆွဲပြီးစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိသည်။ တာယာရှင်းလင်းမှုကိုဂရုပြုသင့်သောတာယာဘောင်များပေါ်တွင်ခိုင်မာသောအာမခံချက်တစ်ခုကဤအချက်သည်သင့်ကို ပိုမို၍ ဘက်စုံသုံးမှုပေးသည်နှင့်အမျှ ပို၍ ပြောစရာများလေဖြစ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျယ်ပြန့်သောတာယာများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ လမ်းမှားလမ်းများကြိုက်နှစ်သက်ပြီးစွန့်စားခန်းအနည်းငယ်ပြုလုပ်လိုပါက mudguard များ၊ ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများအစုံအလင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဘောင်မှနောက်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာအောက်ဆုံးကွင်းခတ်ဖြစ်သည်။ စက်ဘီးတိုင်း၏ကွင်းဆက်တပ်ဆင်ထားသည့်အတွင်းပိုင်း ၀ ိုင်အတွင်း ၀ င်နေသောအ ၀ ိုင်းပါ ၀ င်သည့်ကွင်းဆက်များသည်ကျွန်ုပ်စာအုပ်တွင်အပိုဆုကြေးများရရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပြီးကြာရှည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခုငါ Imean ဘီးတွေအားလုံးစက်ဘီးတိုင်းမှာအဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြနေပြီ။ အခုတော့ entry-level စက်ဘီးစီးလေ့ရှိတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် entry-level ဘီးတွေပါလာတာကြောင့်စက်ဘီးစီးသူတွေဟာလိုင်းအောက်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်တာကလူကြိုက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းပဲ။ သူတို့ဟာအားကစားကိုပိုတက်ကြွပြီးပိုမိုပေါ့ပါး၊ ပိုမိုခိုင်မာသော၊ လေခွင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုကိုလဲလှယ်လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်စက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များပိုများလာသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းလည်းနိမ့်သည်။ ပိုမိုလွယ်ကူသည့်ဘီးပါသော်လည်းသင်၏စက်ဘီးကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုနေသည့်အတိုင်းရှာဖွေနေသည့်ဘီးများကိုအကဲဖြတ်သောအခါဘီးသည်ပိုမိုအားကောင်းလာစေပြီးပိုမိုအားကောင်းလာစေသည့်အတွက်သင်အနားကွပ်အကျယ်ကိုကြည့်ရှုရန်လည်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးမှာသင်ပိုမိုကျယ်သောတာယာများနှင့်ပိုမိုသင့်တော်သောဘီးများတပ်ဆင်လိုသဖြင့် 25mm တာယာသို့မဟုတ် 28mm တာယာများကဲ့သို့အနည်းငယ်ပိုမိုကျယ်ဝန်းသည့်အနားကွပ်အကျယ်အနည်းငယ်သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်၊ ဆုပ်ကိုင်မှုအနည်းငယ်ပိုရှိသည်။ အနည်းငယ်လျော့နည်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူမြန်နှုန်း။
သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးလမ်းဆိုင်ကယ်ဝယ်သောအခါသင်သိထားသင့်သည့်အခြားမြန်ဆန်သောအချက်အလက်များကိုယခုငါပေးမည်။ လမ်းဘေးစက်ဘီးများကိုအချောသပ်သောဘောင်းဘီတိုများနှင့်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ဘောင်းဘီတိုမပါသောသက်သောင့်သက်သာမရှိသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်းနှီးသက်တောင့်သက်သာရှိမှုသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်သည်။ ပြိုင်ကားစက်ဘီးအများစုသည်ခြေနင်းဖြင့်မလာကြပါ၊ အချို့အနိမ့်ဆုံးစက်ဘီးများသည်ခြေနင်းပြပွဲနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရှည်လျားစွာစီးနင်းခြင်းသို့မဟုတ် EOBs အားကစားများပြုလုပ်ပါကသင့်အားအနည်းငယ်ပိုထိရောက်စေရန်ခြေနင်းသွားလာမှုကိုလျှော့ချရန်သင့်ကိုခွင့်ပြုသည့်အနေဖြင့်ကလစ်မပါသောခြေနင်းများနှင့်ဖိနပ်အချို့ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အမျိုးသမီးများအတွက်စက်ဘီးကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တူညီတဲ့ဘောင်ရှိဖို့လိုပေမယ့်လိင်အကြားခန္ဓာဗေဒကွဲပြားခြားနားမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဆက်အသွယ်အချက်တွေရှိဖို့ဆိုရင်တော့သင်ဟာတိုတောင်းတဲ့ပင်စည်၊ လက်ကိုင်ဘားနှင့်အနည်းငယ်တိုတောင်းသောအကန့်များရှိသောအထူးဘေးထွက်ကုန်းနှီးကိုရရှိသည်။ သို့သော်ဒါကလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ သငျသညျကျောက်စရစ်သို့မဟုတ်ရောနှောမျက်နှာပြင်ဆိုင်ကယ်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်။
ဤရွေ့ကား၊ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုပြင်ထားသောအနည်းငယ်သောလမ်းဘေးစက်ဘီးများဖြစ်သည်။ သို့မှသာသင်ပိုမိုတာယာများပိုမိုလွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသံချဲ့စက်များ၊ လမ်းပေါ်တွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သည်။ ကက်ဆက်တွင်ကြီးမားသောကြယ်ပွင့်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဆိုလိုတာကသင်မှာစက်ဘီးစီးတာနဲ့တောင်ပေါ်မှာစက်ဘီးစီးတာထက်ပိုမြန်တဲ့လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးရှိတယ်။ ကျောက်စရစ်ခဲဒါမှမဟုတ်သတို့သမီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစီးနိုင်တယ်၊ ပုံမှန်စက်ဘီးစီးတာကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်၊ စွန့်စားခန်းလိုချင်တဲ့နောက်ခံအမျိုးမျိုးရော၊ စက်ဘီးအနည်းငယ်ထုပ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လမ်းပေါ်မှာမနေချင်တဲ့ခရီးသည်တစ်ယောက်ပဲ။ တာယာအဟောင်းတွေကိုလဲပါးလွှာပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့စေတဲ့လမ်းမတွေကိုလဲလှယ်နိူင်တယ်။ မင်းမှာလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးရှိတယ်။ ငါကဒီစက်ဘီးအမျိုးအစားတွေအများကြီးပါပဲ။ ဝင်ပေါက်အဆင့်ကျောက်စရစ်စက်ဘီးတစ်စီးဟာပေါင် ၅၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၆၀၀ လောက်သွားတယ်။ ယူရို။ ကြောင်၏နွားများသည်ကျွန်ုပ်၏စွန်သစ်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအခြားပစ္စည်းများစွာကိုလည်းရှာဖွေခဲ့သည်။ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်းပါးကိုနှစ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားထပ်မံပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမေ့ခဲ့သည် ယခုသင်၌ကံကောင်းချင်တော့မည်သည့်စက်ဘီးကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ချင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးနှင့်အခြားအသုံးဝင်သောအစပြုသူအချို့အကြောင်းဆောင်းပါးများရှိသည်။
Claris: ၈ မြန်နှုန်း။
Tiagra: 10-speed ကို။
105: 11- မြန်နှုန်း။
Ultegra: 11- မြန်နှုန်း။
Ultegra Di2: 11-speed အီလက်ထရောနစ်။
Dura-Ace ကို: 11- မြန်နှုန်း။
Dura-Ace ကို Di2: 11-speed အီလက်ထရောနစ်။
Shimanoအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်များကမ္ဘာပေါ်တွင်စက်ဘီးဂီယာစနစ်။ စက်ဘီးဝါသနာရှင်များအကြားတွင်ဤစနစ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနှင့်စိတ်ချရဆုံးဖြစ်သည်။ တံဆိပ်၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အခြားစက်ဘီးများအတွက်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
SRAM Shimano ထက်ပိုကောင်းသလား
Shimanoနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းနှစ် ဦး စလုံးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များလုပ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်စတိုင်များကွဲပြားခြားနားပါသည်။ လက်ရှိအစိတ်အပိုင်းရှုခင်းကိုကြည့်ပါက၎င်းကိုပြောနိုင်ပါသည်Shimanoယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခုပိုမိုရှေးရိုးစွဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအရှက်ကွဲခြင်းပိုပြီး aggressive drivetrain ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလိုက်။ သိရသည်။06.09.2019
Shimano ဒါမှမဟုတ် Microshift ကဘာလဲ။
အချို့ကုမ္ပဏီများသည်ပြိုင်ဘက်ကင်းကြသည်။ ဒါစျေးကွက်သွားပုံပဲ။ ပြောသမျှကိုငါပြောမယ်Microshiftတော်တော်လေးလုပ်ခဲ့တယ်ကောင်းတယ်အလုပ်ပေးခြင်းShimanoသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံတစ်ခုပြေး။ အများစုမှာMicroshiftderailleurs အတိအကျ kinematics ပါရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ shift တုံ့ပြန်မှုသည်ဂီယာအားလုံးတွင်တည်ငြိမ်နေသည်။
ယင်းပိုပြီးတသမတ်တည်းပြောင်းကုန်ပြီ။ မင်းအချိန်တိုင်းလိုချင်တဲ့ဂီယာကိုထိမိမှာပါ။ဒါဟာသင့်ကိုအပြိုင်အဆိုင်အခွင့်အလမ်းပေးပြီးနှစ်ခုလုံးစီးသွားတဲ့လူအများစုကပိုကြိုက်လိမ့်မယ်Di2ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယင်းနည်းနည်းပိုတိကျတယ်၊ ပိုပြီးတိကျတယ်။၂၁-၂၀၂၀ ။
Shimano or SRAM ကဘာကောင်းလဲ။
Shimanoနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းနှစ် ဦး စလုံးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များလုပ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်စတိုင်များကွဲပြားခြားနားပါသည်။ လက်ရှိအစိတ်အပိုင်းရှုခင်းကိုကြည့်ပါက၎င်းကိုပြောနိုင်ပါသည်Shimanoယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခုပိုမိုရှေးရိုးစွဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအရှက်ကွဲခြင်းပိုပြီး aggressive drivetrain ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလိုက်။ သိရသည်။
(???????, Kabushiki-gaishaShimano) သည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်စက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာနှင့်လှေလှော်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။Shimano ရဲ့အဓိကထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများမှာ Kunshan တွင်ဖြစ်သည်။တရုတ်; မလေးရှား၊ နှင့်စင်္ကာပူတို့ဖြစ်သည်။
ဝယ်ရန်အကောင်းဆုံး Shimano ဂီယာဘယ်ဟာပါလဲ
သင်၏ရှာဖွေမှုတွင်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံး Shimano ဂီယာများစာရင်းကိုပြီးစီးခဲ့ပါပြီ (2) - shimano စံသွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော derailleur cable ကို shift cable (1.2x2100-mm) ။ 2. Shimano Ef41 3X7-Speed ​​Brake / Shift Lever ကို Black St-ef41 သတ်မှတ်မည်။ ၃။ Shimano MF-TZ31 Tourney Freewheel (14-34T Mega7Speed) အညွှန်းကိန်းကိုက်ညီမှုရှိ။
ကန ဦး set-up နှင့်ညှိနှိုင်းမှုမှာအသစ်က R7000 Shimano Ultegra နှင့် Dura-Ace ကိုအောက်ပါအတိုင်း။ groupet အသစ်၏ဂီယာများကိုတပ်ဆင်ရန်အစကတည်းကကြည့်ရသည်မှာပိုမိုရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးပေါ် Ultegra နှင့် Dura-Ace နှင့်အမျှပုံမှန်အားဖြင့်ချိန်ညှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ဘယ် Shimano ရဲ့ညာဘက် Shift lever ကဘယ်လဲ။
SHIMANO Altus Right Shift Lever 7-Speed ​​SL-M315-7R ပါးလွှာသောအဓိကလီဗာကိုယ်ထည်။ Numbered gear display သည် handlebar ၏အောက်တွင်တည်ရှိပြီး gear position ကိုဖော်ပြသည်။ Shimano ၏ optislick cable များ၌လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းထားသောအနိမ့်ဆုံးအလွှာသည် cable routing ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးကောင်းမွန်သောချေးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။